Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अर्थ ⁄ वाणिज्य – Emountain TV
काठमाडौँ, १६ चैत । प्रदेश २ सरकारले लक डाउनको अवधिमा विपन्न, किसान, मजदुर र श्रमिकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लक डाउन गरेको…
काठमाडौँ, १६ चैत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। उद्योगी–व्यवसायी र अर्थशास्त्री यस्तै अवस्था रहिरहे चालु आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर तीन÷चार प्रतिशतमा…
काठमाडौँ, १५ चैत । सनराइज बैंकले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री पिपिइ हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले शनिबार टेकुस्थित अस्पताल पुगि…
रुपन्देही, १४ चैत । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थापना गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले रु ५० हजार र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले रु १० हजार प्रदान गर्नुभएको छ । नगरपालिकामा कार्यरत सबै…
काठमाडौँ, १४ चैत । पछिल्ला दिनमा आम नागरिकमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगप्रति आमजनताको आकर्षण बढेको छ । सरकारले बुधबार मात्रै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय…
काठमाडौँ, १४ चैत । सर्वसाधारणले ग्यास अभाव महसुस गरिरहेका बेला सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्न चुलो तथा विद्युत् महसुल दुवैमा सहुलियत दिने भएको छ । सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालीले इन्डक्सन चुलो…
काठमाडौँ, १४ चैत । मुलुक लकडाउनमा गएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। यतिखेर विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको छ। विद्युत् उत्पादन १३ सय मेगावाटभन्दा माथि छ भने खपत यति बेला ६२५ मेगावाटको हाराहारीमा…
काठमाडौँ, १४ चैत । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले मुलुकभर १ हप्ता लकडाउन गरेपछि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । कोरोना भाइरसका कारण यसअघि नै पूर्वाधार निर्माणका कामहरू…
काठमाडौँ, १३ चैत । कोभिड—१९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेको आज तेस्रो दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शून्य अप्रेशनमा छ । अहिलेसम्म हेलिकप्टरको उद्धार (एक-दुई वटा मात्रै उडान)…